आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ चैत्र २५ गते, बुधबार) - Rastrakokhabar
आजको राशिफल ( वि. सं. २०७७ चैत्र २५ गते, बुधबार)
२५ चैत्र २०७७, बुधबार ०७:००
अग्रजहरूको सहयोग जुट्नुका साथै शुभचिन्तकहरूबाट उत्साह प्राप्त हुनेछ। पराक्रमी कार्य सम्पादन गर्दै नाम र दाम कमाउने बेला छ। सहयोगीहरूले राम्रो फाइदा दिलाउनेछन्। उद्योग र व्यापारमा पनि मनग्य लाभ हुनेछ। मिहिनेतले जीवनशैलीमा सुधार ल्याउनेछ। लगनशीलताले विभिन्न अवसर दिलाउनेछ। आँटेको काम सजिलै सम्पादन हुनेछ।
दैनिक आवश्यकता पूरा हुनेछन् भने मिहिनेतको फल प्राप्त हुनेछ। आम्दानी बढ्नाले उत्साह जाग्नेछ। श्रमको उचित मूल्य पाइनेछ। व्यापारमा राम्रै फड्को मार्न सकिनेछ। छोटो समयमै राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। रोकिएको काम बन्नाले जिम्मेवारी समेत बढ्न सक्छ। दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ। रकम सञ्चयमा भने अलि बाधा पुग्न सक्छ।
परिबन्धले केही चुनौती निम्त्याउन सक्छ। ठूलो भागको आशा राख्दा भएको वस्तुसमेत गुम्न सक्छ। अरूका विषयमा चासो लिँदा व्यर्थैमा झमेला बेहोर्नुपर्ला। वादविवादले काम राेकिन सक्छ। केही उपलब्धिको स्रोत भने पहिल्याउन सकिनेछ। व्यापारमा लाभ लिने समय भए पनि तत्काल आंशिक लाभांश प्राप्त हुनेछ। प्रियजनको साथले नयाँ आशा जगाउनेछ।
Previous Post	मुख्यमन्त्री पौडेलको राजीनामा माग गर्दै वाग्मती प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध
Next Post	पहिलोपटक पत्रकार महासंघको प्रत्यक्ष निर्वाचन आज
सुनको मुल्यमा गिरावट,चाँदी स्थिर